AGAASIME ABOKOR OO DEEDAFEEYEY WARKA LEEXINTA MUCAAWIMADA DUGSIGA FARSAMAD BURCO – Somali Schools
17th October 2019 at 1:05 pm
AGAASIME ABOKOR OO DEEDAFEEYEY WARKA LEEXINTA MUCAAWIMADA DUGSIGA FARSAMAD BURCO
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Somaliland, Mudane Axmed Abokor, ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshaha dibudhiska Dugsiga Farsamada Gacanta ee Burco. Mudane Abokor oo magaalada Burco khudbad uga jeediyey bahda waxbarashada, masuuliyiinta Gobolka iyo Degmada, iyo dadweyne ka soo qayb galay xaflad—–ayaa sheegay inaanay jirin kaalmo laga leexiyey Waxbarashada Burco. “Ma jirto lacag Burco leedahay oo loogu talo galay in lagu caawiyo oo lagu dhiso Dugsiga Farsamada Burco oo Hargeysa loo wareejiyey, ma jirto…Qofkii caddayn u hayaa ha keeno, oo dadka ha u keeno” ayuu Agaasimuhu goobtaasi ka cadeeyey.
Dhanka kale Agaasimaha ayaa tilmaamay in Dugsiga Farsamada ee Burco meel sare kaga jiro qorshaha wasaaradda isagoo sheegay “Dugsiga Farsamada Gacanta ee Burco, Togdheer, dugsi muhimad gaar ah u leh weeyaan Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland”. Sidoo kale Agaasime Abokor wuxuu ka waramay halka ay marayso waxbarashada dugsigaasi. “Dusigaasi hadda wuu shaqeeyaa. Arday baa wax ku dhigata. Fasalka saddexaad ee [Form 3] ayay marayayaan, iminka [Form 4] ayay galeen. Waxaana jira waxbarasho gaagaabanoo, xirfadaha gaagabnoo ka socota”.
Sida laga warqabo dad aan ka tirsanayn bahda waxbarashada ayaa baraha bulshada ku faafiyey in dhaqaale Hay’adda jarmalka ah ee GIZ ku caawisay dibudhiska Dugsiga Farsamada Burco loo warejiyey dugsiyada la midka ah ee ku yaalla Hargeysa. Warkaasi oo aan lahayn caddayn toos ah ayuu Agaasime Abokor si weyn u daadefeeyey isagoo ka dhawaajiyey in “Soomaalidu had iyo jeer warka aan saxda ahayn bay warwareejiyaan”. Sidoo kalena wuxuu ugu baaqay dadka ‘warka aan saxa ahayn’ fidinaya in “qofka warka runta ah loo sheegayaa hadduu beeninayo inuu caddayn keenaa fiican”.
Ilaa iyo hadda, dadka wada warkan uu beeniyey Agaasime Abokor, ma jirto cid caddayn lagu kalsoonaan karo si muuqata ugu soo bandhigtay kuna muujisay jiritaanka warka ku saabsanaa wareejinta mucaawimada Burco.
#Agaasimaha Guud ee Waxbarashada #DUGSIGA FARSAMADA #Somaliland GIZ programs #Somaliland Technical Institutes
DUGSIGA FARSAMADA EE 15KA MAY, MUQDISHO, OO LA DAAHFURAY
AGAASIMAHA GUUD EE WAXBARASHADA SOMALILAND OO TOGDHEER BOOQASHO KU SOO MARAY